Shwe Da Gon Pagoda in Mist | My Burmese Blog
Shwe Da Gon Pagoda in Mist	On May 6, 2011	by Htoo Tay Zar	With	3 Comments	- Photography	ဒီနေ့ မနက် ၂ နာရီ​လောက်​မှာ မြို့​ထဲ​မှာ ကို​စိုး​ကြီး၊ ကို​မျက်လုံး၊ ကို​ရဲ​အောင်သူ၊ exiter တို့​နဲ့ အတူ ည​ဘက် ကြယ်​မိုးရွာ​မှာ​ကို ဓာတ်​ပုံ ထွက်​ရိုက်​ဖြစ်​ပါ​တယ်။ မြို့တော်​ခန်းမ တစ်ဖက်​က ရှေ့နေ​ရုံး နဲ့ လွတ်လပ်​ရေး​ကျောက်တိုင်​နား​မှာ စခန်းချ​ပြီး စောင့်​ကြ​ပါ​တယ်။ အဓိက​က ရှေ့နေ​ရုံး​က အဂ​လိပ်​ခေတ် နာရီ​ကြီး နဲ့ ရိုက်​ဖို့ လုပ်​ကြ​တာ​ပါ။ ကံ​မ​ကောင်း​ချင်​တော့ ၄ နာရီ​အထိ အရိပ်​လေး​တောင် မ​တွေ့​ရ​ဘူး။ ဒါ​နဲ့ ပြည်​သူ့​ရင်ပြင်​ဘက်​ကို ချီ​တက်​ပါ​တယ်။
ပြည်သူ့ရင်ပြင်​ဘက်​မှာ ဝယ်​ထား​တဲ့ light panel နဲ့ portrait ရိုက်​တယ် နောက် စောင့်​ရင်း​နဲ့ ရွှေတိဂုံ​ဘုရား​မှာ တိမ်​တွေ နိမ့်⁠နိမ့်​လေး ကပ်​ပြီး ဖြတ်​သွား​နေ​တာ​နဲ့ ဓာတ်​ပုံ ရိုက်​ဖြစ်​ပါ​တယ်။ ဒီ​လို​မျိုး​မြင်​ကွင်း​က ထူးခြား​ပါ​တယ်။ တိမ်​တွေ​က ဘုရား အလယ်​ပစ္စ​ယံ​လောက်​က​နေ ကပ်​ဖြတ်​ပြီး အပေါ်​ဘက်​မှာ​က ကြည်လင်​နေ​တဲ့ ကောင်းကင် ဖြစ်​နေ​တာ​ပါ။ ဒါ​နဲ့ စောင့်​ရိုက်​တယ် ခဏ​နေ​တော့ ပြည်​သူ​ရင်ပြင် တံခါး​ဖွင့်​တာ​နဲ့ အထဲ​က​နေ ဆင်ရုပ်​တွေ​နား​အထိ တိုး​ရိုက်​ဖြစ်​တယ်။ အမှန်​က တစ်ဖက်​နေရာ​လေး​ပဲ လေ့​ကျင်​ခန်း​လုပ်​ဖို့ ခွင့်​ပေး​ထား​တာ။ နောက်​တော့ ဒီ​ပုံ​ရ​လာ​ပါ​တယ်။ ဒါ​နဲ့ သဘောကျ​လို့ ဘ​လော့ဂ်​မှာ ပြန်​တင်​လု​ိက်​ပါ​တယ်။ ည​မ​အိပ်​လိုက်​ရ​ပေ​မယ့် သွား​ရ​ကျိုး​နပ်​ပါ​တယ်။ စကားမ​စပ် ဒီ​နေ့ ညနေ​မှာ ကွ​ျန်တော် ပုဂံ​မှာ​လုပ်​မယ့် Ubuntu Linux ပွဲ​ကို လိုက်​သွား​ဖို့ ခရီးသွား​ပါ​ပြီ နောက်​ရက်​တွေ​မှာ ဘ​လော့ဂ်​တင်​ချင်​မှ တင်​နိုင်​ပါ​မယ်။ မ​အား​လို့ ကြိုတင်​လဲ ဘာ​မှ မ​ရေးထား​လိုက်​နိုင်​ပါ​ဘူး။ ပုဂံ၊ ကျောက်​ဆည်၊ အင်း​ဝ၊ ဦး​ပိန်၊ မန္တလေး ကို အစီ​အစဉ်​ဆွဲထား​တယ်။ ဓာတ်​ပုံ​ရိုက်​ဖို့ ကို​ရဲ​အောင်သူ​နဲ့ ၂ ယောက်​ထဲ လစ်​ပါ​မယ်။ ပိုက်ဆံ​လောက်​သေး​ရင် ပြင်​ဦး​လွင်​ကို တက်​ဖု​ိ့​စဉ်းစား​ထား​ပါ​တယ်။ ပုံ​များ မ​ကြာ​မှီ​လာ​မည် မျှော်….. Photography	3 Comments	Tun Tun
အရမး္ မုိက္တယ္။ ဘာ မွန္ေၿပာင္း နဲ. ဆက္တင္ ေတြလဲ ေၿပာၿပေပးပါဦး။ း)
ကွျန်တော် ရိုက်တုန်းက tripod နဲ့ ရိုက်ဖြစ်တာဗျ lens က EFS 55~250mm မှာ f9 ISO 100 Exposure time 3.2 နဲ့ ရိုက်ဖြစ်လိုက်တာပါ… အဓိကက ရာသီဥတု နဲ့ တိမ်တွေက တော်တော်လှ သွားတာ ပါမယ် ထင်တယ် ခင်ဗျ. ကျေးဇူး bro
Like or Dislike:00	Peaceful